Xubno ka tirsan Urur Diimeed Cusub oo lagu xiray magaalada Hargeysa | SAHAN ONLINE
Xubno ka tirsan Urur Diimeed Cusub oo lagu xiray magaalada Hargeysa
Gen. Cabdillaahi Fadal Iimaan
HARGEYSA – Ciidamada Booliska Somaliland ayaa xabsiga dhigay xubno kamid ah culimadii dhawaan kaga dhawaaqay urur diimeedka ay ugu magac dareen Al-Saaciduuna Bil Xaq kaasoo ay sheegeen in qorshihiisa soo wadeen muddo afartan sanno ah.
Kooxdan culimada ah ayaa mar keliya ururkooda kaga dhawaaqay magaalooyinka Hargeysa,Muqdisho,Masar iyo Puntland.
Taliyaha Ciidamada Booliska Somaliland Sareeyo Guuto Cabdillaahi Fadal Imaan ayaa sheegay in howlgalo ay ciidamada Booliska sameeyeen lagu soo qabtay saddex kamid ah kooxda culimada ah ee ururka kaga dhawaaqay Somaliland.
Sareeyo Guuto Cabdillaahi Fadal Imaan ayaa sheegay in ururkaas uu yahay mid sharci darro ah isla markaana uu khalkhal gelinayo amniga Somaliland.
Ciidanka boolisku waxay gacanta kusoo dhigeen Saddex xubnood oo kamid ah xubnihii ku dhawaaqay Ururkaas ah waxaana isla markiiba si deg deg ah looga xalaaleeyey maxkamadda awooda u leh iyo xeer ilaalinta”ayuu yiri
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxa si weyn loo hadal hayey koox culimo ah oo ku dhawaaqay xarako cusub oo Islaami ah taasoo bulshadu si weyn u hadal haysay.